Hiran State - News: HS:- Magaalada Belet Weyne oo ay ka socoto
HS:- Magaalada Belet Weyne oo ay ka socoto
HS:-Tan iyo markii ay si buuxda ula wareegeen magaalada Belet Weyne ciidamada Hiiraan ee dagaalka ba'an mudada kula jiray kooxahii dhamaadkii sanadkii tagay looga itaal roonaaday gacan ku heynta magaalada Belet Weyne ayaa waxaa magaalada siweyn looga dareemayaa isbedelo dhinaca dib u dhiska iyo nadaafada ah.
Maamulka cusub ee Hiiraan ayaa maalmahii tagay waday sidii uu dib ugu dayac diri lahaa xarumahii dowlada sida bangiga, saldhig booliska iyo waxii la mid ah, walow aan wali dayacdir loohelin garoonka diyaaradaha oo isagu ah midkii isku xiri lahaa shacabka Hiiraan dal iyo dibad, waxaana ay hada dadka doonaya Hiiraan u maraan amaba isticmaalaan garoono aad uga fog fog oo ay mararka qaarkood dhibaato xaga safarka ah ku qabaan kadib markii uu bur bur xoogan soo gaaray garoonka diyaaradaha Ugaas Khalif ee magaalada B/weyne.
Inkasta oo ay dadaalo hada u muuqda bilaaw wadaan maamulka cusub hadane dib u dhiska iyo nabad ku soo dabaalida Hiiraan iyo Soomaaliya ma ahan wax sahlan maadaama uu dalku fowdo ku jiray 22 sano. waxaan sidii la rabay wali Hiiraan ugu laaban qurba joogta oo markaad la sheegeysato iyagu kuu sheegaya iney laabanayaan marka ugu horeysa ee dib loo howl galiyo garoonka diyaaradaha magaalada Belet Weyn.
Marka laga soo tago dib u habeynta lagu wado qaar ka mid ah xarumaha degmada Belet Weyne waxaa jira dadaalo lagu soo dhaweynayo ciidamo ka socda Amisom oo bedelaya kuwa dowlada Ethiopia ee hada ku sugan qeybo badan oo ka mid ah Hiiraan. ciidamadan oo ka socda dowlada jabouti ayaa waxaa lagu soo waramayaa iney bulshada Hiiraan iyo maamulkaba ay aad u sugayaan imaatinkooda.
Sikastaba ciidamada Jabouti ayaa marka ay gaaraan halkaas kala kulmi doona soo dhaweyn aan caadi aheyn marka la eego sida ay wax u socdaan iyo diyaar garoowga loogu jiro sidii loo soo dhaweyn lahaa, maadaama wadanka jabouti iyo Hiiraan labaduba yahiin dhul Soomaaliyeed sida ay kuu sheegayaan bulshada ku dhaqan magaalada Belet Weyne marka aad kala hadasho arimaha ciidamamada Amisom ee Hiiraan imaanaya.
La soco wararkeena danbe iyo xaalada Hiiraan
· admin on April 21 2012 11:39:22 · 0 Comments · 2261 Reads ·
14,633,266 unique visits